भाग्ने र डराउने सोचले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँदैन र ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsभाग्ने र डराउने सोचले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउँदैन र ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सिनेमा यात्राको ट्रेलर रिलिजको समयमा अभिनेता सलिनमान बनियाँलाई पत्रकारले ए मेरो हजुर ३ सँग सिनेमा जुध्न लागेको कुरा सोधे । सिनेमा जुध्न लागेकाले यो प्रश्न स्वभाविक पनि थियो ।
तर, अभिनेता सलिनमान बनियाँको जवाफ भने अपेक्षा गरे अनुसारको थिएन । सलिनमान बनियाँले दिएको जवाफमा उनको मनमा प्रतिस्पर्धा र डर दुबै रहेको प्रष्ट हुन्थ्यो ।
पहिलो कुरा त एउटा सिनेमा अर्कोसँग जुध्दा डर, प्रतिस्पर्धा सोच्ने वित्तिकै त्यसले अस्वस्थ अवस्था निम्त्याउँछ । सलिनमानले आफू प्रतिस्पर्धाबाट नडराउने र नभाग्ने पनि बताए । उनको यो चेतावनी उनलाई नै सिनेमामा ल्याएका निर्माता र निर्देशकमाथि थियो ।
यहाँ सलिनमान डराउनुपर्ने र नभाग्नु पर्ने कुरा नै छैन । एउटै मितिमा २ सिनेमा जुध्दा घाटा त हुन्छ नै । तर, कुनै पनि सिनेमाको टिमले प्रतिस्पर्धाको अवस्था सोच्यो भने त्यो सिनेमा क्षेत्रका लागि नै घातक हुन सक्छ ।
सलिनमानले आफूले नेपाली फिल्मको नम्बर १ अभिनेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकाले हारेपनि डर नहुने तर्क दिएका थिए । सलिनमानले यो आफै बोले या उनलाई टिमले नै यो कुरा सिकाएको हो, यो उनले नै जान्ने कुरा भयो । तर, यो सोच डरलाग्दो छ ।
सिनेमा जय भोले र छक्का पन्जा ३ को रिलिजको समयमा पनि यो प्रतिस्पर्धा चर्को देखिएको हो । यो समयमा त राजनीति नै उच्च रुपमा हाबी भयो ।
निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माले निर्माता दिपकराज गिरीको सिनेमासँग जसरी पनि जुधाउने निधो गरे । लामो समयसम्म खेल चल्यो । सिनेमाको ट्रेलर सार्वजनिक गर्न नै निर्माताहरु अर्काको बाटो हेरे ।
त्यो बेलामा देखिएको राजनीति सामान्य निर्माताले धान्न सक्ने खालको थिएन । दिपकराज र अशोक दुबै खेलाडी भएकाले, त्यसलाई मिलाएर खेले । अब, यो बर्ष पनि यी दुई भिड्न तयार छन् । आउँदो दशैमा यी दुइको इगो झनै बढ्नेछ ।
सिनेमा क्याप्टेन चल्दा पनि यस्तै समस्या देखिएको हो । अनमोल केसी र हेमराज वीसी विचको इगोले गर्दा सिनेमा जुध्यो । अभिनेता आशिरमान देशराज जोशीले आफू नडराउने प्रतिक्रिया दिए । सिनेमाको व्यापार सबैसामु स्पष्ट छ ।
सिनेमा रोज र रामकहानीको भिडन्त पनि यही प्रतिस्पर्धा र डरको विचमा सुरु भएको हो । निर्देशक सुदर्शन थापा र अभिनेत्री पूजा शर्मासँग रोज सिनेमाका निर्देशक निरक पौडेल र अभिनेता प्रदिप खड्काको प्रतिस्पर्धात्मक भावनाले खेल खेल्यो । रोज असफल भयो । रामकहानी औषत रुपमा चल्यो ।
नेपाली फिल्ममा भिडन्तको जुन खालको खेल खेलिन्छ, त्यो भयंकर छ । यो भयंकर रोगबाट मुक्त हुन जरुरी छ । अर्कालाई सक्छु भन्दा आफू सकिएको निर्माताले पत्तो नै पाएका छैनन् । यस्तो अवस्थाले सिनेमा क्षेत्र अघि बढ्दैन ।
मलाइका अरोराको फोटोशूट
वरिष्ठ कलाकार हरिवंश आचार्यको प्रमुख आतिथ्यतामा सायमी र निरौलाको ‘बैंशालु ती डाली’ सार्वजनिक
नेपाली फिल्मको खुम्चिएको बजार, तर चर्को हल्ला
March 23, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- कुनै समय नेपालमा साउथका सुपरस्टार रजनीकान्तको सिनेमाले मात्र प्रवेश पाउथ्यो । कारण, साउथका अन्य कलाकार नेपाली दर्शकका लागि नौलो थिए । यसैले त्यहाँका सिनेमा किनेर नेपालमा ल्याउने हिम्मत कसैले गरेन । तर, अब […]
March 21, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
February 13, 2019 Tulasa Karki Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- नेपाली सिनेमा क्षेत्र बलिउडबाट प्रभावित छ । बलिउडमा यस्तो हुन्छ र उस्तो हुन्छ भन्ने सुनिन्छ । बलिउडबाट नेपाली सिनेमाको कथा प्रभावित हुन थालेको त सुरुबाट नै हो । बलिउडका सिनेमा हेरेर हुबहु चोर्ने […]